Kanbera - Wikipedia
Kanbera magaaloka qaasimad waddanka
Kanbera (Ingiriis: Canberra) waa caasimada dalka Australia.
Australia Canberra (kænbərə / (Ku dhawaad ​​codka maqalka) KAN-bər-ə)  waa caasimadda Australia. Iyadoo dadweynaha ah 403,468,  waa magaalada ugu weyn ee gudaha ee Australia iyo guud ahaan siddeedaad magaalada ugu weyn. Magaaladu waxay ku taallaa dhanka waqooyiga caasimadda Australian Capital (ACT), 280 km (170 mi) koonfur-galbeedka Sydney, iyo 660 km (410 mi) woqooyi-bari ee Melbourne. Qof deggan Canberra waxaa loo yaqaan Canberran. Inkasta oo Canberra yahay caasimadda iyo kursiga dowladda, wasaaradaha xukuumada federaaliga ah waxay leeyihiin kuraas labaad oo ah magaalooyinka caasimadda, sida guddoomiyaha iyo ra'iisal wasaaraha.
Goobta Canberra waxaa loo doortay meesha ay ku taal caasimadda qaranka ee 1908 iyadoo ay ka soo horjeedaan kooxaha ka soo horjeeda Sydney iyo Melbourne oo ah labada magaalo ee Australia. Waa wax aan caadi ahayn magaalooyinka Australia, oo ah magaalada oo dhan oo qorshaysan oo ka baxsan gobol kasta, oo la mid ah Washington, D.C. ee Maraykanka, ama Brasília ee Brazil. Ka dib tartankii caalamiga ahaa ee naqshadeynta magaalada, qorshe ay samaysay Walxel Burley Griffin iyo Marion Mahony Griffin ayaa la doortay waxaana dhismuhu bilaabmay 1913-kii. Qorshaha Griffins wuxuu uqaabilnaa qaabdhismeedka joomatari sida wareegyada, qodxaha iyo saddex xagalka, waxaana lagu dhajiyay axooyinka la jaanqaaday dhulalka waawayn ee Australian Capital.
Naqshadeynta magaaladu waxay saameysay dhaqdhaqaaqa magaalada beerta waxayna ku dareysaa meelaha muhiimka ah ee dhirta dabiiciga ah. Kobaca iyo horumarinta Canberra ayaa caqabad ku noqotay Dhibaatooyinka Dunida iyo Duufaanta Weyn, taas oo sii kordhisay khilaafaadka qorshaynta ee taxadar ah iyo waxtar aan loo baahnayn oo ah soo bandhigid munaasib ah oo loo sameeyay si loo kormeero horumarinta magaalada. Caasimadda Qaranka ayaa noqotay magaalo horumar leh ka dib Dagaalkii Dagaalkii 2aad ee Adduunka, oo ahaa Ra'iisul Wasaare Sir Robert Menzies oo kiciyay horumarkiisa, Guddiga Horumarinta Qaranka ayaa la sameeyey awoodaha fulinta. Inkasta oo Gobollada Awoodda Australiya ay hadda is-maamulaan, Dowlad-goboleedka Commonwealth waxay haysaa saamaynta ayadoo loo marayo Hay'adda Qaranka ee Sare.
Sida kursiga dowladda Australiya, Canberra waa goobta Golaha Aqalka Baarlamaanka, degaanka rasmiga ah ee wakiilka Monarch ee Goboleedka Guud, Maxkamadda Sare iyo waaxyo badan oo dowladda iyo hay'adaha. Sidoo kale waa meelo badan oo ka mid ah hay'adaha bulshada iyo dhaqanka ee muhiimadda muwaadiniinta ah, sida qoraallada dagaalka ee Australiya, Jaamacadda Qaranka ee Australia, Royal Australian Mint, Australian Machadka Isboortiga, Galbeedka Qaranka, Matxafka Qaranka iyo Maktabadda Qaranka. Qeybta milatari ee Ciidamada Australia waxaa loo tababaraa Royal College College, Duntroon iyo Akhriska Ciidamada Difaaca Australia ayaa sidoo kale ku yaal caasimadda.
ACT waxay ka madax bannaan tahay dowlad kasta si looga hortago mid ka mid ah gobol kasta inuu helo faa'iido adoo martigelinaya awoodda Dawlada Dhexe. ACT waxay wakiil ka tahay Baarlamaanka Dawlada Dhexe, waxayna leedahay Golaha Sharci-sameynta iyo Dawladda, oo la mid ah Dawladaha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanbera&oldid=210257"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Maarso 2021, marka ee eheed 12:15.